Nagu saabsan - Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd.
RuiYi waa adeeg -bixiye xirfadle ah iyo soo -saare saxan aluminium aluminium ah oo ku yaal Shiinaha sidoo kale waxaan la kaashannaa warshad caan ah oo aluminium ah oo ku dadaasha inay ka ilaaliso macaamiisheenna dhinacyo kala duwan. Warshadeena waxaa la aasaasay 1997, hadda shirkaddu waxay leedahay shaqaale guud oo ka badan 4000, oo ay ku jiraan in ka badan 300 shaqaale farsamo yaqaan ah.
Iibka Sanadlaha ah
Soo -saaraha, Wakiilka, Dhoofiyaha, Shirkadda Ganacsiga, Iibiye
Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Galbeedka Yurub, Bariga Yurub, Bariga Aasiya, Koonfur Bari Aasiya, Bariga Dhexe, Afrika, Oceania, Adduunka
Si aad u noqoto xalka ugu wanaagsan ee Hal-Joog ah ee Bixinta Aluminum Aluminum ee Shiinaha.
Waxaa naga go'an inaan bixinno alaabada aluminium ee heer caalami ah. Ma jiraan wax annaga nooga muhiimsan marka loo eego qanacsanaantaada buuxda ee adeegga iyo badeecadda leh tayo aan caadi ahayn, koritaan joogto ah, fursado, iyo xiriiro labada dhinacba faa'ido u leh.
Xiaoxian RuiYi Commercial Trade Co., Limited ayaa diiradda saareysay alaabada daawaha aluminium tayo sare leh in ka badan 10 sano Shiinaha. Waxaan u bilownay sidii qaliin yar, laakiin hadda waxay noqdeen mid ka mid ah alaab -qeybiyeyaasha ugu horreeya warshadaha aluminium ee Shiinaha.
Dooro faa'iidadeena weyn ee weyn
Hantida weyn si loo hubiyo tayada
Laga soo bilaabo amarka la saaray shixnadda dibedda, saddex kormeer oo tayo leh ayaa la sameeyaa si loo hubiyo in heerka u -qalma ee alaabada la dhammeeyay uu ka sarreeyo 100%. Waxaan leenahay alaab tiro badan, waxaanan siin karnaa macaamiisha sahay ku filan si aysan macaamiishu uga welwelin dhibaatada haysata alaabada iyo yaraanta kaydka.
Bixinta waqtiga iyo kaydinta kharashka
Waxaan ballan qaadeynaa in marka macmiilku amro, badeecadaha dhibcaha la soo diri doono isla maalintaas. Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd. waxay si kal iyo laab ah u siisaa alaab tayo sare leh macaamiisha gudaha iyo dibaddaba, waxayna siisaa macaamiisha alaabo lagu qanco.
Khibrad adeeg oo sifaysan
Waxaan ballan qaadeynaa in shirkadeena ay dabagal ku sameyn doonto amar kasta waqtigeeda si loo hubiyo in macaamiishu ay si ammaan ah u heli karaan alaabta, u dhegeystaan ​​ra'yigooda iyo talooyinkooda si joogto ah, oo ay dib ugu milicsadaan dhibaatooyinkeena. Macaamiishu ha dareemaan nafis.
Daawaha Aluminiumku wuxuu joogteeyaa tayo sare oo badeecada ah inta lagu jiro habka wax soo saarka oo dhan. Laga soo bilaabo keenista ingot iyo ciid ilaa jeegga cabbirka ugu dambeeya, fiiro gaar ah ayaa la siiyaa dhammaan badeecadaha sida lagu qeexay xaashiyaha xakamaynta hannaanka shuruud kasta oo shubka ah.
Goobaha tayada leh waxaa ka mid ah spectrometry-ka baaxadda leh ee falanqaynta birta, SPC ee xakamaynta ciidda, tijaabinta jirka, dheeha dheeha, raajada, baaritaanka cadaadiska iyo hubinta cabbirka elektaroonigga ah. Habka kaydinta diiwaanka oo baaxad leh ayaa u ururinaya xogta si loo helo raad -raac dhammaystiran. Barnaamijyada xakamaynta wax -soo -saarka kombiyuuterka ee farshaxanka ayaa bixiya cusboonaysiinta xaaladda wax -soo -saarka maalin kasta oo u oggolaanaysa inay si joogto ah u gaarsiiyaan waqtiga.
Daawaha Aluminiumku wuxuu sii wadaa u heellanaantiisa tayada iyada oo loo marayo barnaamij joogto ah ee xarunta iyo hagaajinta habka si loo daboolo baahiyaha macmiilka mustaqbalka, gaar ahaan codsiyada adag.